Tacliinta iyo Jaceylka iyo aragtida dhalinyarada | HimiloNetwork
Tacliinta iyo Jaceylka iyo aragtida dhalinyarada
Posted by: Zakariya in Wararka February 28, 2017	0 1,069 Views
Muqdisho (Himilonews) – Waxay yiraahdeen jaceylku malahan xad iyo soohdin. Ma yaqaan caddaan iyo madow. Ma qoro sabool iyo tanaad. Mana ku sargo’na kuf iyo gayaan.
Hayeeshe, tacliinta iyo caashaqa waa doodda ilaa hadda aan baalasheedaba la laabin ee u furan gorfeynta. Taas waxay caadiyan timaada marka aad la sheekeysato da’yarta ku jirta wax-barashada ee lab iyo dhedigba ka kooban.
Warka fiican ayaa ah inaysan jirin arday wali mustaqbalkooda ku eersaday jaceyl ay la derseen iyo xiriir kalgacal oo ay wadaageen. Warka aan lagu qancin ayaase ah inaan isku si loo wada arkin halka jaceylku kaga aadan yahay da’yarka ku jira wax-barashada.
In badan oo da’yarta ku jirta, sida Abdiraxman Faarax Abdulle iyo Deeqa Abdi Seeraar, oo ku jira heerka wax-barasho, jaceylka iyo tacliinta waxay u arkaan laba aan kulmeyn
“Qofku laba qalbi malahan. Waxaan u arkaa mid adag in la isku wado jaceyl iyo wax-barasho. Waayo markii guriga ku laabato ma waxad ka fikirtaa ereyadii laguugu yiri ee macaanaa mise meeriska casharadda lagaa rabo?” ayuu is-weydiiyay Faarax.
Deeqa oo iyadna la dhacsan aragtida Faarax ayaa kusii dartay: “Jaceylka iyo wax-barashada wax-yaabo badan ayaa ka dhaxeeyo, hadana la islama wadi karo. Haddii la isku wadana waxay isku noqonayaan caqabad.”
In kale – kuwaas oo waaya’arag kusoo noqday sahay ka dhigashada jaceylka xilligii wax-barashada – sida Farxiyo Aadan Xasan, jaceylka iyo tacliinta waa laba weel oo isku ningaxan.
“Waxay iila muuqataa in la isku wadi karo waxaana keenaya taas, qofku ma mashquulayo haddii hammigiisa uu yahay inuu wax-barto; inuu xiriir sameeyo ayaaba ku saacidaysa hankiisu inuu sarreeyo. Waxaad rabtid baro, samey; marba xiriirkaadu saameyn kuma yeelanyo hadafkaada,” ayay tiri Farxiyo.
Ku kala duwaanaanta aragtida laga qabo haddii xiriir ka dhaxeyn karo jaceylka iyo tacliinta aalaba ma ahan dood ku dhalatay habeen kaliya. Waxaa jira waaya’aragnimo kala duwan oo da’yarta qaar dhaxalsiisay qaadashada go’aanka ay ka joogaan arrintan.
Ka Abdiraxman ahaan, waxaa jira waqti uu maagay inuu isku wado jaceylka iyo tacliinta oo ugu dhamaaday natiijo uusan la dhicin. Waana taas markii ay ku dhalatay fikirka maanta uu ka qabo.
“Marbaan anigoo dugsiga hoose ku jira isku dayay inaan jaceyl-wadaag la noqdo, hayeeshe natiijo kama gaarin. Markii aan kusii adkeysan maagayna, waxaan ogaaday in mustaqbalkaygu uu saameyn karo. Waana markaas kolkii aan isu sheegay in labada mid ku dheeraado.”
Marka loo eego Farxiya, waxaa jira waqti la jilo haasaawaha jaceyl ee lamaanaha ka dhaxeeya iyo waqti lagu mashquulo diyaarinta iyo aqriska duruusta.
“Uma jeedo wax caqabad ah. Waayo xillina waxad ku jirtaa howlahada wax-barashada xillina waxaad nafta ku maaweylinaysaa haasaawe shukaansi ee jaceylkaada. Markay howluhu kugu bataanna, waxaad isu sheegeysaan inaad sheekada badan hakisaan inta imtixaannadu idin kaga dhamaanayaan.”
Balse taasi waxaa cagsigeeda qaba Deeqa oo sheegeysa in jaceylku uusan boos ku yeelan Karin qalbiga arday wax-baranaya. Wiilashana uma aragto dhibanaha koobaad ee eersan kara haddii uu isku lammaaniyo tacliinta iyo wax-barashada.
“Waalidkii ku dhalay wax-barasho ayay kuu keeneen, maya inaad jaceyl barato. Mar kastana gabdhuhu waa dhibanaha koobaad, waayo iyaga ugu qalbi nugul, beer-jilcan oo mar kasta habsaan ka noqda wax-barashada.”
Hayeeshe kusii dheeraanshaha xiriirka jaceylka iyo ku bixinta waqtiyo badan shukaansiga iyo haasaawaha, waxay mar mar keensataa in hakiyo kobcintiisa.
“Haaa aniga hadda masii wado xiriirkii hore, waayo howlaha oo igu batay iyo haasawaha badan ee aan habeenkii ku bixin-jiray shukaansiga ayaa caqabad isku noqday. Waxaana iska yareeyey waqtiga shukaansiga, waanse rajaynayaa inaan dib u bilaabo in yar kadib.”
In kasta oo qalbigu lahayn xakame adag oo looga ilaalin karo inuusan wax calman, hadana kuwa qaba in kala dheereeyo jaceylka iyo wax-barashada ayaa dhanbaal u diriya kuwa ku dhagan in la isku wadi karo.
Farriintoodu waa inaan laga hordhicin waqti jaceylku mudan yahay inuu isku soo beego oo madashiisa lala sugo.
“Markaad lacag hesho oo aad wax-barato, ayaa ah marka aad ka mira-dhalin karto jaceylka aad qabto ama ku galay, laakiin inta aad wax-baranayso iska lab baalashada shukaansiga,” ayuu ku taliyay Faarax.
Si walba oo ay tahayse, inaad wax jeclaato ma ahan inaad wax baran weydo; inaad wax baran weydana, ma ahan inaad wax jeceshahay maadaama halka wax laga jeclaado ay tahay qalbiga; meesha wax laga bartana ay tahay maskaxda.
Previous: Habka tacliinta dadban ee koorsada la yiraahdo iyo aragtida ardayda
Next: Maya ku dheh – Takoorka iyo Takoorista
Buurfuulihii Buurta ugu tagay Bisad ku nool!
Xafladdii Qalin-jebinta sanadlaha ee Jaamacadda Muqdisho oo maanta lagu qabtay Muqdisho.
Muslim loo dilay cunista hilib Lo’aad
Filim-sameeye Malaysian ah oo qaatay diinta Islaamka.